This product is blue color pipe and fittings and type isi other plastic building materials ,TEE / EQUAL TEE / ELBOW / SCOKET /COUPLING / MALE ELBOW / FEMALE SOCKET.
စတီးပိုက် ကို ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ အခြေခံအဆောက်အဦးပိုက်များ၊ ရေလွှဲပြောင်း၊ အဆောက်အဦးနှင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုကြသည်။ စတီးပိုက်၏အားသာချက်များမှာ အဆင်ပြေသောဈေနှုန်းနှင့် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပင်ဖြစ်ပါသည်။
Stainless steel Butt Welding Pipe Fitting / Sanitary Pipe Fitting/ (Elbow, Tee, Reducer, Cross, Flange, Stub End), Forged Welding Pipe Fitting(Union, Coupling, Outelt, Boss, Bushing, Plug, Nipple)
Double Fire Hydrant Stand Pipe သည်မီးသတ်ပိုက်ခေါင်းနှစ်ခုပါရှိပြီး မီးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရန်နှင့် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရန် အသုံးပြုပါသည်။ စိန်သုံးလုံး ကုမ္ပဏီမှ စက်ပစ္စည်းများကိုလဲနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မီးသတ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် မီးသတ်ပိုက်ခေါင်းသည် မီးငြိမ်းသတ်ရာတွင်အဆင်ပြေချောမွေ့ပါသည်။ ကလေးများအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိသည်။ အရည်သွေးကောင်းမွန်ပြီးဈေးနှုန်းသက်သာပါသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စတီးပိုက်များကို Shwe Moe Kyei ကုမ္ပဏီမှ ပစ္စည်းအရည်အသွေးမှန် ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါသည်။ ထိုင်ဝမ် နှင့် အီတလီနိုင်ငံမှ စတီးပိုက်များကို တိုက်ရိုက်ဖြန့်ချီ လက်လီလက်ကားရောင်းချပေး လျှက်ရှိပါသည်။ ၄င်းစတီးပိုက်များ၏ ထူးခြားကောင်းကျိုးများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ -	ထုထည်ကြီးမားပြီး ရှည်လျားသောအချင်းရှိသောပိုက်အမျိုးအစားများဖြစ်ပါသည်။ -	ဈေးနှုန်သင့်တင့်ပြီး အရည်အသွေး မြင့်မားကောင်းမွန်ပါသည်။ -	ဝယ်ယူအားပေးသော customer/ partner များ၏ ယုံကြည်မှုကို ရရှိစေပါသည်။ -	ဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးပေးခြင်း နှင့် သွပ်ရည်စိမ် စတီးပိုက်များဖြစ်သည့်အတွက် ရေရှည်အသုံးခံပါသည်။
သိမ်းဆည်းရလွယ်ကူ၍ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်သော ရေပိုက်
ကားရေဆေးခြင်း၊ ပန်းပင် ဥယျာဉ် ရေဖျန်းခြင်း၊ ခြံသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ခြင်း စသည့် ကိစ္စများအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သော ရေပိုက်ဖြစ်ပါသည်။ ရေဝင်မှသာ ပိုက်ရှည်ထွက်လာပြီး ပြန်သိမ်းသည့်အခါ ၃ဆအထိ အလိုအလျောက် ကျုံ့သွားသဖြင့် နေရာစားလည်း သက်သာ၊ သိမ်းဆည်းရလည်းလွယ်ကူပြီး အလေးချိန်လည်း ပေါ့ပါးသောကြောင့် ခရီးဆောင် အဖြစ်ပင် သယ်သွား နိုင်ပါသေးသည်။ ပေ၁၅၀အရှည် ရေပိုက်ကို ဖြုတ်သိမ်းပါက ပေ၅၀ လောက်သာ ရှိပါသည်။ ပေ၂၀၀အရှည် ရေပိုက်ကို ဖြုတ်သိမ်းပါက ၆၅ပေလောက်သာ ရှိပါသည်။ မော်တာ၂ကောင်အားဖြင့် မောင်းသော ရေဖိအားကိုပင် ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ခိုင်ခံ့သော ပိုက်သားကြောင့် ၅တန်အထိ အပေါ်မှတက်ကြိတ်ခံနိုင်ပါသည်။ ၂၀၀၀လီတာရေတိုင်ကီကို အမြင့်မှ သွယ်တန်း၍ သော်၎င်း၊ 0.5hp ၅မူးအားရှိသော ရေမော်တာ တွန်းအားဖြင့် သော်၎င်း ပက်ဖျန်းမှ ရေပိုက်အရှည် ဆံ့ထွက်နိုင်ပြီး ဖိအား တွန်းအား ပျော့ပါက ပိုက်ရှည်ထွက်အား ရေပန်းအား နည်းပါလိမ့်မည်။ဘုံဘိုင်ခေါင်းတွင် လွယ်ကူစွာ တပ်စွပ်နိုင်သော Free Size ပိုက်စွပ်ပါရှိကာ ကျွတ်ထွက်မသွားစေရန် တင်းကျပ် ထားနိုင်သော Lock လည်း ပါရှိပါသည်။ ထိပ်မှ ရေပန်းခေါင်း ကိုလည်း အပြင်း/အပျော့ လိုသလို ချိန်ညှိနိုင်ပြီး ရေထွက်သည့်ပုံစံ Flat. Center. Cone. Full. Mist. Jet. Shower ဟူ၍ ၇မျိုး ရွေးချယ် ပက်ဖြန်းနိုင်ပါသည်။ ထူးခြားချက်မှာ အရှည်မည်မျှပင် ဖြစ်စေကာမူ အခြားပိုက်များကဲ့သို့ ပိုက်ခေါက်ခြင်း၊ လိမ်ခြင်း လုံးဝ (လုံးဝ) မဖြစ်ပါ။ spray magic gun မှာ ဆပ်ပြာရည် 100CCအထိ ထည့်နိုင်ပြီး ကားရေဆေးရာတွင် ရေတစ်လှည့်ဖျန်း ဆပ်ပြာရည်တစ်လှည့်ဖျန်းပြီး ပွတ်တိုက်ဆေးကြောပြီးလျှင် ရေသက်သက်နှင့် ပြန်လည်ဖျန်းနိုင်ပါသည်။ ရိုးရိုးပိုက်ခေါင်းထက် ပိုမိုခိုင်ခန့်ပြီး ရေအနည်းအများချိန်ညှိနိုင်ခြင်း၊ ဆပ်ပြာရည်ထွက် အနည်းအများ ချိန်ညှိနိုင်ခြင်း အပြင် Magic Hose တွင် မူရင်းပါလာသည့် ပိုက်ခေါင်းအတိုင်း ရေထွက်သည့်ပုံစံ Flat. Center. Cone. Full. Mist. Jet. Shower တို့လည်း ပါရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ Magic Hose ကို မူရင်းပါလာသည့် ပိုက်ခေါင်းမယူပဲ spray magic gun ဖြင့် တွဲယူပါက +၅၀၀၀ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ဝင်တစားဖြင့် မရှင်းလင်းသည်များကို မေးလိုပါက (သို့မဟုတ်) ပစ္စည်း မှာယူလိုပါက 09- 263430191, 09- 777918199, 09- 975511477တို့ကို ဖုန်းဆက်၍ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်၊ မြို့နယ် နှင့် မှာယူလိုသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် တို့ကို မေးမြန်း မှာယူနိုင် ပါသည်။ ဆက်သွယ်မှာယူပါက ရန်ကုန်မြို့တွင်း Door to Door အိမ်အရောက်ပို့စနစ်ဝန်ဆောင်ခဖြင့် ပို့ဆောင်ပေး ပါသည်။ ဆိုင်မှာ လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှု စမ်းသပ်ပြီး စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မှ ဝယ်ယူလည်း ရပါသည်။ အခြားနယ်များမှ မှာယူလျှင် ဘဏ်မှ ငွေကြိုလွှဲရပြီး ငွေလက်ခံရရှိမှသာ ကားဂိတ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးပါ သည်။
Fujii Ball Valve ရေပိုက်ဆက် ပစ္စည်းများ
FUJII FOOT VALVE ရေပိုက်ဆက် ပစ္စည်းများ
ICE BIBCOCK TAP ရေပိုက်ခေါင်း
ထိုင်ဝမ်မှ တိုက်ရိုက်တင်သွင်း ရောင်းချသော ရေပိုက်ခေါင်း အမျိူးအစားဖြစ်သည်။ကျိူးခြင်း၊ပဲ့ခြင်း မရှိဘဲ ကြာရှည်ခံ အသုံးပြုနိုင်သည်။အဖြူရောင်တစ်မျိူးသာ အဓိကထားထုတ်လုပ်သည်။အသေးစိတ် အချက်လက် နှင့် အရောင်အသွေးစုံ အရည်အသွေးပြည့် ဒီဇိုင်းများကို ကျွန်တော်တို့ Showroom သို့လာရောက်ကြည့်ရှု ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ICE NOZZLE ONE WAY FAUCET TAP ရေပိုက်ခေါင်း
The BX pump is suited to larger pools with large filters, or pools with swim jets and in-floor cleaning systems. It hasasuperior flow rate and is designed to produce high efficiency and reduced noise levels compared to other pumps. It is manufactured in Australia and hasa3 year in-field warranty. The BX 1.5 horseower pump draws 440 litres of water per minute and turns over 26,400 litres per hour.
Myanmar 's largest B2B marketplace for Pipe, Pumps Accessories. You can buy and sell pipe,plastic pipe,pump,steel pipe,tap,valve&nbsp;&nbsp;in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>